KB vondrona orinasa
KB vondrona orinasaKimroy Bailey2018-08-14T16:08:14-05:00
The Kimroy Bailey Group of Company
The Kimroy Bailey Group dia orinasa manana miliara dolara ary orinasa iraisam-pirenena fampiofanana Interactive, Business Process Outsourcing, Consultation and Software Development ho an'ny Indostrian'ny Robotics havaozina. Ny Vondrona KB dia mampiditra am-pahatoniana ny famokarana angovo azo havaozina miaraka amin'ny Robotika sy ny fahiratan-tsaina. Ny vondrona izao dia miasa ao Istanbul, Barcelona, ​​Hong Kong, Guangzhou, New Dehli, Hamburg, Zurich, Miami ary Manchester. Ny orinasa Kimroy Bailey dia an'i Kimroy, Sherika vadiny tsara tarehy sy ilay zanany mahafatifaty, Keilah Bailey. Ny Baileys 'mirehareha mino an'i Popsie (Andriamanitra) sy ny herin'ny Ràn'i Jesosy Kristy.
Ny orinasa Kimroy Bailey dia ahitana an'i Kimroy Bailey Renewables, Kimroy Bailey Robotics, ary ny Kimroy Bailey Foundation ary nanomboka ny asany tamin'ny Desambra 2011.
Nandritra ny taona maro dia nanombo ny asan'ny orinasa izahay, ankoatra an'i Antarctica dia nanompo ny mpanjifa isaky ny kontinanta. Tanjonay ny hifikitra hatrany amin'ny fototry ny hahazoana antoka fa manome ny traikefa fianarantsika tsara indrindra sy ny serivisy fanompoana miavaka ho an'ny mpanjifanay raha mitondra ny ho avin'ny sehatry ny angovo azo havaozina sy ny tontolo Robotika.
Hitanay ny vondrona orinasa Kimroy Bailey rehefa manangana vatana isika. Manana sandrika roa amin'ity vondron'ny orinasa mitambatra ity isika, KB Renewable sy KB Robotics. Ny fahitantsika avy amin'ny ambaratonga ambony dia ny fanitarana sy fampidirana ireo tanana roa an'ny orinasam-pifandraisana ity miaraka amin'ny fiarahana miasa eo amin'ny sandrin'ny olombelona hanao izay hampisondrotra ny vatana.
Mazava ho azy, rehefa manorina ny vatana manampy ny voyage isika, ny tongotra, ny tongotry ny Vondrona dia hivelatra amin'ny faritra hafa tsy ho ela.
Ho anao izay liana sy mieritreritra- Ahoana ny lohan'ny vondrona? Inona izany na iza? Avelao ny vadiko hanazava tsara izany - Jesosy Kristy no Lohan'ity tarika ity ary manao sonia tanteraka ny lalànan'ny Fanjakan'ny lanitra izahay. 🙂
2018 - Fandidiana natao tany Eropa sy Azia
2017 - Manitatra ny asa mankany Etazonia sy Amerika Latina
2016 - Namboarina Rasta Robot ary nanomboka nanolotra serivisy fanamboarana
2015 - Natsangana ny fananganana serivisy fanohanana sy fanohanana momba ny masoandro manerantany
2014 - Namboarina ny kitapo fanatanjahantena fiaramanidina voalohany
2013 - Startly Kimroy Bailey Robotics
2012 - Nanomboka ny fanavaozana Kimroy Bailey
2011 - Nanomboka ny Kimroy Bailey Foundation
Toy ny any an-danitra, dia toy izany koa no eto an-tany. Ny tanjonay dia ny fampiasana ireo loharanon'ny lanitra, ny rivotra, ny masoandro ary ny zava-drehetra havaozina sy ny fampiasana ny eritreritra any an-danitra amin'ny ezaka rehetra ataontsika.
Ny fahitantsika azy dia ny orinasa manankarena indrindra manerantany sy mizara izany fanambinana amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny mpanjifantsika sy ny mpanjifany ho lasa miliaridera marobe. Ny tanjonay dia ny hahazoana antoka fa faly ny mpikambana ao aminy ary mampihatra ny fitsipiky ny lanitra ao amin'ny politikany izy ireo. Amin'ny Anaran'i Jesosy, Amen.
KIMROY BAILEY - TALE
Kimroy Bailey dia iray amin'ireo mpikambana mpanorina ny orinasa Kimroy Bailey orinasa ary izy no mpanova be indrindra eto an-tany eo amin'ny sehatry ny angovo azo havaozina sy robotika
SHERIKA TROTT-BAILEY - TALE
Sherika Trott-Bailey mpikambana mpikambana ao amin'ny vondrona orinasa Kimroy Bailey izay iray amin'ireo sain'ny orinasa manerantany